नेपालमा आठ महिनामा तीन करोडको सियो आयात ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल ||5April, 2022
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो आठ महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कपडा सिलाउने सियो आयात गरेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार २०७८ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त मूल्यका सियो नेपाल भित्रिएको हो ।
पछिल्लो आठ महिनामा कुल ३ करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सियो नेपालले आयात गरेको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सो मूल्यमा २ करोड ९९ लाख ५५ हजार ४१ थान र १२ हजार ४ सय ७३ केजी सियो नेपालले आयात गरेको छ ।
विभागका अनुसार क्यानडा, चीन, भारत, इटाली, जापान, केन्या, दक्षिण कोरिया, स्वीडेन, स्वट्जरल्याण्ड, टाइवान, अमेरिका र कतारबाट नेपालमा सियो भित्रिएका छन् ।
नेपालले सबैभन्दा बढी सियो भारत र चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती आठ महिनामा चीनबाट २ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र भारतबाट ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सियो नेपालले आयात गरेको देखिन्छ ।
आगामी दश वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले विभिन्न देशबाट २ करोड ५४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको सियो आयात गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयात गरेको भन्दा बढी मूल्यको सियो नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा आयात गरिसकेको छ ।
किन बन्न सकेन नेपाल कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर
कुनै पनि मुलुक एक्लै सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । धनी मुलुक होस् वा गरिब मुलुक, कोही पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वबजारमा आफूले जे बेच्न सकिन्छ त्यो बेच्ने र आवश्यक वस्तु किन्ने हो । पछिल्ला तीन-चार दशकदेखि हामीले विश्व बजारमा कुनै खास वस्तु बेच्न सकेका छैनौँ।
हामी वस्तुभन्दा सेवा (मानव श्रम) बेच्ने मुलुकमा परिरहेका छौं । खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा हामी युवाको श्रम बेचिरहेका छौँ र त्यसबाट आएको पैसाले खाद्यान्न खरिद गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ। अहिलेको विश्वमा जसले वस्तु,सेवा, सीप र प्रविधि बेच्न सकेको छ त्यो मात्र सफल बनेको अवस्था छ। हामीले जस्तो सस्तो श्रम बेचेर कोही पनि मुलुक सम्पन्न हुन सकेको छैन।
हामीकहाँ सम्भावना र अवसर नभएका होइनन्। जलस्रोत र जडीबुटी मात्र राम्रोसँग बेच्न सके पर्याप्त आम्दानी हुन सक्छ। प्रत्येक वर्ष करोडौँको संख्यामा मानिस समुन्द्रको सयर गर्न पुग्छन्। आवश्यक प्रचारप्रसार र उचित प्रबन्ध गर्न सके तिनै मानिसलाई हिमाल हेर्न ल्याउन सकिन्छ। रमणीय र लोभलाग्दा हिमालका काखमा नरमाउने प्राणी कुन होला?
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
भारतले रोक्यो नेपालमा गहुँ निर्यात - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
५.८४ प्रतिशत होला त आर्थिक वृद्धिदर ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा के असर पर्छ ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो - Mero LifeStyle Mero LifeStyle